Italia, Tonizia: Tenina Mpifindra Monina Mikasika ny Lohataona Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, polski, Ελληνικά, Italiano
Nanomboka ny volana janoary 2011, niteraka andiana fiovàna maro izay nanamarika, amin'ny lafiny endrika sy vokany, ny fanoherana maneran-tany sy ny fandraisana anjaran'ny mponina ireo zava-niseho tao Afrika Avaratra. Niatrika fanarenana lalina ny kolontsainan'ny fihetsiketsehana nahazatra fahiny sy ny fikatrohana an-tambajotra isika, na dia, ankehitriny, aza ny adihevitra mbola misokatra foana amin'ny anjara asan'ny Web 2.0 ao anatin'ny ady eo amin'ny fanjakana sy ny hetsika fanoherana.
Mbola (ary mijanona ho) laboratoara mahaliana ho an'ireo haino aman-jery sy ny politika ny ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, izay nanome aingam-panahy, tao anatin'ny famokarana tsy miankina maro, fanadihadiana an-dahatsary iray izay manome fitenenana mivantana ireo Afrikana Tavaratra sy Afrikana mipetraka ao Italia. Mitondra ny lohateny hoe #Revolution, novokarin'ny olon-tsotra mpanao tatitra avy ao amin'ny fikambanana Voci Globali tao amin'ny tanànan'i Padou sy Bolona ilay lahatsary. Inona no dikan'ireo revolisiona ireo ho an'ireo mpifindra monina ? Inona no hevitr'izy ireo mikasika ny anjara asan'ny Aterineto manoloana ireo vokatra azo ? Fomba fijery maro no mivoaka avy amin'ireo tafatafa ireo : ireo mihevitra ny Tranonkala ho toy ny vimiaina manipy hankany amin'ny fahombiazana, ny hafa kosa dia mifanohitra amin'izany, manohana ny hoe tsy hahasolo ny eny an-dalambe ny tambajotra sosialy.
Ity ilay lahatsary manontolo [amin'ny teny italiana nadika soratra ho amin'ny teny anglisy, boraho ny “menu” mba hisafidianana ny dika] .
Halefa amin'ny 14 novambra ao Padoue ny #Revolution, amin'ny fotoanan'ny fivoriambe ”Tonizia, ny vanim-potoanan'ny jasmina” [amin'ny teny italiana, toy ny rohy rehetra manaraka ato, raha tsy misy filazana mifanohtra]. Hiseho ao anatin'ny sehatry ny Immaginafrica ilay hetsika, fetibe manan-danja atokana ho an'ny sarimihetsika afrikana, tohanan'ny Departemantan'ny Tantara ao amin'ny Oniversiten'i Padou. Ilay fetibe, noforonina tamin'ny 2005, dia maniry ny hampiroborobo ny fahalalan'ny tanibe afrikana ao anatin'ny fahasarotany rehetra, mba :
Hialana amin'ity endrika toa matetika ankosotra, ampahantraina, apetapetaka ary amin'ny ankapobeny ratsy izay, voizin'ny lojikam-panohanana, miteraka fahasarotana maro amin'ny fanomezan-danja ny toeran'ny olona ifampiresahana; mampitodika amin'ny fomba lehibe ny tatitra ho any amin'ny fifindramonina io, anefa ny fankatoavana ny lova voajanaharin'ny kolontsaina samihafa, amin'ny alalan'ny fahafantarana tsara sy feno ny fomba filaza ara-kolontsaina atolony – izay ahafahan'ny mpifindra monina mandray anjara – dia mety ho lasa fanohanana azo ekena amin'ny fanorenana tatitra manita-tsaina ho an'ny andaniny sy ny ankilany.
Hatramin'ny niantombohany, ireo mpandrindra ity fetibe ity dia nametraka hetsika fisantarana maro izay ny famoronana sehatra oniversitera momba ny sarimihetsika afrikana, indrindra miteny frantsay, amin'ny alalan'ny fampisongadinana ny anjara asan'ny mpanorina an'i Borkina Faso. Voalohany amin'ny karazany ao Italia ity fahaizana manokana ity : ankoatra ireo fampianarana, mikasa ny hanao fifanakalozana eo amin'ireo Italiana sy Borkinabe mpikaroka izy io (ohatra, toy ilay tsikeran'i Justin Ouoro [frantsay]) tao anatin'ny sehatra tetikasa fiarahamiasa teo amin'ny Oniversiten'i Padoue sy ny an'i Oagadogoa. Halefa mandritra ny fetibe amin'ity taona ity ilay lahatsary “Pégase” [frantsay] avy amin'ilay Maraokana Mohamed Mouftakir nahazo ny loka tamin'ilay Fetiben'ny sarimihetsika tao Borkina Faso, ny Fespaco 2011 [frantsay].
Immaginafrica 2011. Sary nalaina tao amin'ny sarimihetsika fohy Keniàna ‘Pumzi’
Ao anatin'ny fandaharana amin'ity fihaonana ity, fanadihadiana roa hafa : “Laïcité, inch'Allah!” [amin'ny teny frantsay], izay novokarina tao Tonizia nandritra ny andron'ny fikomiana, ary ny “I nostri anni migliori” (Ireo taona maminay indrindra), natao tao amin'ireo toby fialofan'ny mpitsoa-ponenana tao Mineo, Manduria sy Palazzo San Gervasio tao Italia. Hanaraka izany ny latabatra boribory, izy handraisan'ilay tanora mpahay tantara sy mpikatroka an-tambajotra Mehdi Tekaya anjara, ary ilay mpitsikera sarimihetsika Tahar Chickaoui [frantsay] sy Fethi Ouesleti, toniziana mpiasa mpifindramonina, izay miseho ao anatin'ilay lahatsary fanadihadiana nolazaina tetsy ambony. Harindran'ilay mpanao gazety sady mpitoraka blaogy Gabriele Del Grande ilay latabatra boribory.
Hangatsiaka ve ny fahavitrihan'ireo tanora ”revolisioneran'ny jasmina” ho amin'ny Lohataona arabo manoloana ireo vokatry ny fifidianana lalam-panorenana tamin'ny 23 Oktrokba lasa teo tao Tonizia ? Tsapa tao anatin'ity tafatafa an'onjam-peo niarahana tamin'ny Tahar Chikaoui ity, izay nampiakarina tao amin'ny tranonkalan'ny Immaginafrica ny hafaliana naseho nandritra ireo hetsika [ho an'ireo tsy mahazo ny teny italiana, ampy hahatsapana ny endrika ara-tantaran'ireo hetsika ny fihetseham-po avy amin'ny feo]. Nanazava ny fetran'ny Tranonkala, ny fahafahany manavao sy ny hasarotry ny fitsinjarana ara-tsosialy ao Tonizia ireo vokatry ny fifidianana toniziana tamin'ny 23 Oktrobra. Ny 27 Oktrobra 2011, nampiakatra ny dikantenin'ny nalana tao amin'ilay lahatsary [arabo] izay novokarin'ny vondrona Facebook Mpanao Politika 10 Tapitrisa [arabo sy frantsay] i Tahar Lamri :
Tsy eto amin'ny Aterineto no handresena amin'ny fifidianana / Tsy handresy azy ireo ianao raha toa ka tsy manao fizahantany any amin'ny olam-bahoaka / Tsy handresy azy ireo ianao raha toa ka dieny mahazo mikrao dia tonga dia miteny hoe : fandalana ny vahoaka, elita, vahoaka tsy mahay na inona na inona, laïka avokoa ny zava-drehetra. / Satria fantatry ny olona nahita fianarana i Brecht, saingy tsy mahafantatra na inona na inona mikasika ny vahoaka izy / Tsy amin'ny alalan'ny hira no handresena amin'ny fifidianana. Ninoan'ny ‘aliena’ fa ny planeta Mars i Tonizia, izay no nahatonga azy ireo ho resy.
Mandritra ity fihaonana ity ihany koa no hisian'ny fanolorana ny boky eletronika “70 chilometri dall'Italia” (70 kilaometatra miala an'i Italia), navoakan'ny Voci Globali sy i Mehdi Tekaya ihany koa. Taorian'ilay fahombiazana azony tamin'ny famoahana voalohany, nivoaka tamin'ny lohataona farany teo tao amin'ny quintadicopertina.com, naverina nohatsaraina sy nohavaozina ilay lahatsoratra mba hampidirana ho ao anatiny ny fifidianana lalam-panorenana tamin'ny 23 Oktrobra farany teo, miaraka amin'ny fanehoankevitra sy fandalinana azo taorian'ny famoahana ny vokatra farany. Manolotra panorama ara-tantara sy ara-politika lehibe ilay boky elektronika, miaraka amin'ny fifantenana ny sasantsasany tamin'ireo lahatsoratra mitombina indrindra navoaka tao amin'ny Global Voices in Italiano na tao amin'ireo tranonkala hafa an'ny Global Voices ihany koa (eto, amin'ny teny frantsay).
Ho an'ireo tafatafa nalaina an-dahatsary nomeny anay, tianay ny hisaotra an'i : Fabrice Dapnet, Mariange Sibi, Bacem Bjaoui, Tchouadeu Pouatcha Ulrich, Cheikh Ba, Hakim Jabrani, Zineb Naini, Souad Maddahi, Yassine Baradai, Diop Alioune Badara.